ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၁/၂၀၁၉) ဖြင့် ချမှတ်ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံရာသီဉတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၃၀) စာအုပ်
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ ဦးဆောင်မှု မြန်မာ့ရာသီဉတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် (Myanmar Climate Change Alliance- MCCA)၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရာသီဉတုပြောင်းလဲမှုဆို...
Myanmar Climate Change Policy,Strategy,Master Plan.zip
ဦးစားပေးစက်မှုလက်မှုကဏ္ဍ ၉ခုအောက်ရှိ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (Environmental Management Plan -EMP) ရေးဆွဲရန် အချိန်ကာလတိုးမြှင့်သတ်မှတ်ကြောင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအား www.ecd.go...
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ဦးစီးရုံးချုပ်၊ နေပြည်တော်တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာအတွက် လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ် နေပြည်တော်တွင် ၂၃-၆-၂၀၁၉ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့)၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာ များအတွက် လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူစာရင်းကို ဌာန၏ website ဖြစ်သော​ www.ecd.gov.mm...
DSO Written Result(204 declare).pdf
ကြားကာလအကြံပေးလုပ်ကိုင်သူ မှတ်ပုံတင်ခြင်း အထောက်အထားလက်မှတ်ရရှိသူများ လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါကြောင်း
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ် ၁၇၊ အပိုဒ်ခွဲ(က)အရ အကြံ​​​ပေးလုပ်ကိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆိုင်ရာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် (Consultant Registration Scheme) ထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းမရှိ​​သေးမီ ကြားကာလအတွင်း အကြံပေးလုပ်ကိုင်သူများအား အထောက်အထာ...
Certificate For Transitional Consultant Registration.zip
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ဦးစီးရုံးချုပ်၊ နေပြည်တော် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူစာရင်း
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ် နေပြည်တော်တွင် ပြင်ပဝင်ပေါက်မှ ခေါ်ယူခန့်ထားမည့် ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး နေရာများအတွက် ရေဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူစာရင်းအား ဌာန Website ဖြစ်သော www.ecd.gov.mm ၏ မူဝါဒနှ...
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၇/၂၀၁၉) ဖြင့် ချမှတ်ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမူဝါဒ(National Environmental Policy Of Myanmar)
ကြားကာလအကြံပေးလုပ်ကိုင်သူများမှတ်ပုံတင်ခြင်း အထောက်အထားလက်မှတ်များအား သက်တမ်းတိုးနိုင်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဉီးစီးဌာနအနေဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ် ၁၇ (က) အရ ကနဉီးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ဆောင်ရွက်လိုသည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများကို လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူရ...
Transitional Consultant Registration (Organization and Individual).zip
အောက်ဖော်ပြပါ သတ္တုကဏ္ဍဆိုင်ရာ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များအပေါ် သဘောထားမှတ်ချက်ပေးရန်ရှိပါက ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ eia.ecd@gamil.com သို့ အကြံပြုပေးပို့နိုင်ပါသည် -
MGPF Wetthay EMP.pdf
Shwe Sin Moe (681).zip
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်၊ နေပြည်တော်တွင် ပြင်ပဝင်ပေါက်မှခေါ်ယူခန့်ထားမည့် အမှုထမ်းရာထူးနေရာများအတွက် လူတွေ့အောင်မြင်သူများစာရင်းနှင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ချုပ်ဆိုရမည့် လျော်ကြေးခံဝန်စာချုပ်ပုံစံ
Result and Contract.pdf